Ubungozi beefowuni, iikhompyuter kunye neTekhnoloji echongiweyo kwihlabathi liphela
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Technology » Ubungozi beefowuni, iikhompyuter kunye neTekhnoloji echongiweyo kwihlabathi liphela
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Technology • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Saudi Arabia ayisiyiyo nje inkokeli kushishino lokuhamba kunye nokhenketho lokutsala imibutho, amanyathelo okuba nekomkhulu eBukumkanini, kodwa iZiko likaKing Abdulaziz leNkcubeko yeHlabathi likhathazekile malunga nefuthe lobuchwephesha obutsha ngaphezulu kwengqondo yomntu- ukubakho, nakwiintsapho.
Njengoko ilizwe liziqhelanisa nenyani yasemva kobhubhane elawulwa yitekhnoloji, inkxalabo yoluntu malunga nobungozi bokusetyenziswa gwenxa kokuqokelela isantya.
Ngokophando olutsha olwenziwe kwiziko lenkcubeko esekwe eSaudi Arabia, Ithra, phantse isiqingatha (44%) sabo bonke abantu bakhathazekile malunga nefuthe lokusetyenziswa kwe-intanethi kunye nokusetyenziswa kwe-smartphone kwimpilo yabo.
Kumsitho wokuphehlelela inkqubo yabo yempilo yedijithali- sync, Ithra ibhengeze izicwangciso zentlanganiso yaminyaka le, eza kuba ngoDisemba.
Ngokophando, uninzi (88%) lwabaphenduli kwihlabathi liphela luyavuma ukuba itekhnoloji inokuba yinto enamandla yenkqubela phambili, kunye nezibonelelo eziphambili kubandakanya ukufikelela kwiindaba, unxibelelwano kunye nenkululeko.
Uninzi lwezi zibonelelo lwaziswa ngaphambili kukuqhambuka kwe-COVID-19, nge-64% yetekhnoloji yokufaka ikhredithi ngokunceda ekulweni ubhubhane. Isiphumo, nangona kunjalo, kukuba phantse wonke umntu (91%) uchitha ixesha elininzi kwi-Intanethi njengesiphumo.
UAbdullah Al-Rashid, uMlawuli we-Ithra's yenkqubo yempilo yeDijithali "Njengombutho ozinikele ekutyebiseni umntu ngamnye, thina e-Ithra sifuna ukuqonda iimpembelelo zenkcubeko yokwanda koluntu ngokuthembela kwi-intanethi nakumajelo asekuhlaleni. Ngelishwa, uphando lwethu lubonisa ukuba isiqingatha sabo bonke abantu bakholelwa ekuxhomekekeni kula maqonga kuyonakalisa impilo yabo.
Kungenxa yoko le nto sisungula sync - inyathelo elitsha elenzelwe ukukhulisa ulwazi malunga nentlalo yedijithali, ukuxhasa uphando lwenoveli ngentsebenziswano nemibutho yehlabathi, kunye nokudibanisa iinkokheli zokucinga kwihlabathi liphela ukufumana iindlela ezintsha zokukhusela uluntu.
Amandla anamandla okwenza okulungileyo!
Kuncitshiswe kukunyuka kokukhathazeka
Ngaphandle kokuzithemba, iziphumo zikaIthra zibonisa inkxalabo ebalulekileyo malunga nemiphumela emibi yokufikelela okungakhange kuhlolwe:
Ngemimiselo yokuba ulwalamano, I-42% yabaphenduli bakholelwa ukuba itekhnoloji inciphisa ixesha elichithwe nabantu obathandayo, kwaye ngaphezulu kwesithathu (iipesenti ezingama-37) basola ityala lokuphazamisa imigca phakathi komsebenzi kunye nobomi boluntu. Ukuba ngumzali nako kuyachaphazeleka, nge-44% yabantu abanabantwana abavuma ukuba babavumele basebenzise ikhompyuter okanye i-smartphone engalawulwa. La manani aphezulu nangaphezulu eMntla Melika (60%) naseYurophu nakuMbindi weAsia (58%).
Ukujikela kwimpembelelo yetekhnoloji kwi impilo, isiqingatha (44%) sabo bonke abantu bathi bakhathazekile. Abaphenduli kwi-Afrika esemaZantsi eSahara nase-Asia esemaZantsi babonakala bexhalabile, nge-74% kunye ne-56% ngokwahlukeneyo boyika iziphumo ezibi ze-intanethi kwimpilo-ntle, xa kuthelekiswa ne-27% kuphela eYurophu nakuMbindi weAsia. Ngokuhambelana nokusetyenziswa kweqela okwandileyo, abantu abancinci bafumana iimpawu ezibonakalayo kunabadala babo: I-50% yabaphenduli beGen Z bakhalaza ngokudinwa, ukulala kakubi kunye neentloko ngenxa yokusetyenziswa kwedijithali.
Phantse isiqingatha (48%) sabaphenduli sichitha ixesha elininzi kwi-intanethi kunokuba bebengathanda, nge-41% bevuma ukufumana iimpawu zokurhoxa ngaphandle kokufikelela kwizixhobo zabo. Ukunqongophala kokulala kukwangumbandela obalulekileyo, nge-51% yabaphenduli beqa ubuthongo veki nganye, kunye nomnye kwabane (24%) mihla le, ukusebenzisa itekhnoloji.
Ukuzinikela ekubekeni phambili impilo-ntle yedijithali
Uyazi ngempembelelo yexesha elide enokubakho kwezi ntsingiselo, Ithra ikhuthaza inkqubo yokutyikitya- sync -Ukuxhasa kunye nokukhuthaza iinzame zokubeka phambili impilo-ntle yedijithali.
Oku kubandakanya isimpoziyam ngoDisemba ka-2021, edibanisa iinkokheli zengcinga zehlabathi, amaziko, abachaphazeli, kunye noluntu ukuphakamisa ulwazi malunga neenkxalabo zempilo yedijithali, kunye nokuphuhlisa izimvo ezintsha zokukhusela abasebenzisi beendaba zosasazo kwihlabathi liphela.
Ukufumana ngakumbi, ndwendwela https://sync.ithra.com/
Iziko leKing Abdulaziz leNkcubeko yeHlabathi (i-Ithra) yenye yezona ndawo zinempembelelo eSaudi Arabia, indawo yabantu abanomdla, abayili kunye nabafuna ulwazi. Ngothotho olunyanzelekileyo lweenkqubo, ezentsebenzo, imiboniso, iminyhadala kunye namanyathelo, i-Ithra idala amava akumgangatho wehlabathi kwiindawo zayo zonxibelelwano. Oku kudibanisa inkcubeko, izinto ezintsha kunye nolwazi ngendlela eyilelwe ukubhenela wonke umntu. Ngokudibanisa uyilo, iimbono ezicelomngeni kunye nokuguqula izimvo, i-Ithra iyazingca ngokukhuthaza iinkokheli zenkcubeko zexesha elizayo. Ithra licebo le-CSR yaseSaudi Aramco kunye neziko lenkcubeko lobukumkani, elibandakanya i-Idea Lab, iThala leeNcwadi, iCinema, iTheatre, iMyuziyam, umboniso wamandla, iHolo enkulu, iMyuziyam yaBantwana kunye neIthra Tower.
Ngolwazi olungaphezulu, nceda u tyelele: www.noga.com.